आज हामी टिप्पणीहरू प्रतिनिधित्व गर्ने भन्छु, आफ्नो पूर्ण नाम र केही सम्झन रोचक ऐतिहासिक तथ्य। "मार्क" वा "साइन" को रूपमा अनुवाद ल्याटिन शब्द देखि। हामी एक सांगीतिक संरचना मा ध्वनि को ग्राफिक प्रतिनिधित्व बारेमा कुरा गर्दै छन्। वास्तवमा, हामी यस कला फारममा संकेतन को मुख्य प्रतीक को एक सामना गर्दै हुनुहुन्छ। पूरा नाम सांगीतिक टिप्पणीहरू विशेष प्रतीक द्वारा प्रसारित। कार्यान्वयन, अवधि, ऊंचाई को क्रम: तिनीहरूले ध्वनि को विभिन्न विशेषताहरु गर्न दर्शाउन। तर किन यी वर्ण लिइएको छ? अर्को, गरेको विवरण सबै यो कुरा गरौं।
अर्को नोट को पूर्ण नाम छलफल गरिनेछ। अरेजो को Guido को सांगीतिक संकेतन को लेखक हो। उहाँले XI शताब्दीको पहिलो आधा मा आफ्नो काम सिर्जना गरियो। यसलाई हामी chetyrohlineynom शिविरमा मा प्रतीक इच्छुक छन् रेकर्ड गर्न थाले जसले थियो। तसर्थ, हामी प्रश्न जवाफ दिए, छ संगीत आविष्कार गर्ने। नोट पूर्ण नाम, आज हामी तिनीहरूलाई थाह छ, तुरुन्तै देखा थिएन। युरोपेली संगीत neumes मा प्रयोग गर्न पूर्व। वास्तवमा, हामी विशेष वर्ण बारेमा कुरा गर्दै छन्। द्वारा Guido d'अरेजो सिस्टम सिर्जना पछि यो अंतिम रूप छ। विशेष मा, 5th लाइन थप्ने, प्रमुख, र प्रतीक को उपस्थिति परिवर्तन। हाम्रो सिस्टम को हित मा यसको वर्तमान रूप मा XVII देखि प्रयोग भएको छ। वरिपरि 1700 Andreas Werckmeister - जर्मन संगीतकार र वैज्ञानिक - बाह्र-टोन सांगीतिक मात्रा logarithmically वर्दी को प्रयोग सुझाव। साथै, उहाँले आफ्नो आधारमा स्थापित भएको थियो जो एक पियानो, गरे। लिखित टिप्पणीहरू प्रयोग गर्दा विशेष ध्वनि पिच। म यसरी ताल पारित गर्न सकिएन।
यस खण्डमा हामी अनुवाद संग टिप्पणीहरू को पूरा नाम दिइनेछ। एक धेरै अक्टेभ Language को संगीत एकाइहरु बीच दूरी भने, आफ्नो नाम नै हो। आज प्रयोगहरू एक नम्बर: डु, पुन, माइल, एफए, सोल, ला, सी। संगीत को पूर्ण शीर्षक हामी तल उल्लेख गरे। 440 हर्ट्ज - पहिलो मानक अक्टेभ Language आवृत्ति छ। टिप्पणीहरू मनोवृत्ति, एक अक्टेभ Language द्वारा विभाजित छन् जो, दुई छ। ल्याटिन मा संगीत को पूरा नाम एक संस्करण अनुसार - यो लाइनहरु आरोही अक्टेभ Language मा कार्यान्वयन गर्दै एक भजन छ: शासित queant laxis, REsonare fibris, मीरा gestorum, FAmuli tuorum, polluti, LAbii reatum समाधान। यो सिस्टम Guido d'अरेजो द्वारा शुरू भएको थियो। उहाँले टिप्पणी UT सम्म भनिन्थ्यो। Giovanni Doni को सम्मान मा - भविष्यमा, अझ सहज को उच्चारण, हामी एक वैकल्पिक विकल्प आए बनाउन। साथै, यो टिप्पणी सी थपियो। यसको नाम Sancte Ioannes एक संक्षिप्त छ। यो नाम एच Valrant दिइएको थियो। हंगेरी र संयुक्त राज्य अमेरिका टिप्पणी सी तिवारी मा नाम छ। यो अनुमति दिन्छ तपाईं "सी" यसलाई भ्रममा होइन - ल्याटिन संकेतन गर्न।
संगीत को पूर्ण शीर्षक अन्य हालतमा पनि प्रसारित गर्न सकिन्छ। हामी आफ्नो वर्ण नामकरण बारेमा कुरा गर्दै छन्। ल्याटिन अक्षरहरू द्वारा denoted पाना: सी, डी, ई, एफ, जी, ए, एच यो तथाकथित जर्मन संकेतन प्रणाली हो। उनको टिप्पणी बी मा पत्र एच जर्मन सिस्टम अंग्रेजी छैन जसमा मुख्य एक लगभग हरेक युरोपेली देशमा प्रयोग गरिन्छ प्रसारित छ। बी फ्लेट एक अंग्रेजी संकेतन प्रणाली पनि छ पत्र बी को विधि अनुसार प्रसारित। यसको नियम अनुसार, टिप्पणी बी पत्र बी यो सिस्टम मुख्य रूप बेलायत र अमेरिकामा वितरित छ प्रसारित छ। यो पनि आंशिक स्वीडेन र नेदरल्यान्ड मा प्रयोग गरिन्छ। अंग्रेजी साहित्य मा, पद प्रणाली को नियम। यो अक्सर रूसी संग्रह मा गिटार कर्डहरु को पद मा पाइन्छ। उनको नाम जम्मा टिप्पणी ई समतल -ES थप्न। तेज, प्रयोग -isis चिनो। यो नियम देखि अपवाद छन्। ई, जी, बी, डी, एफ:5शासक staves - Mnemonic स्वागत, कि एक 1 मा छन् टिप्पणीहरू भण्डारण प्रदान यो खातामा तेस्रो मा अन्तराल लिनुपर्छ। सुविधाको लागि, निम्न वाक्यांश एकदम हसाउने छ प्रयोग: "सोल सिसीली दर्ता थर माईग्रेट"।
संगीत को पूर्ण शीर्षक एक छरितो तरिकाले हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। सरल रेकर्डिङ सिस्टम वाद्ययन्त्रहरू को एक किसिम को लागि सिर्जना गरिएको छ। हामी tablature बारेमा कुरा गर्दै छन्। यो किबोर्ड र गितार हुन सक्छ। सांगीतिक संकेतन स्वामित्व गर्छ जसले कुनै व्यक्ति मास्टर गर्न सक्छन् प्रविधी प्रयोग गरेर। यो चाँडै पर्याप्त गरिन्छ।
भनिन्छ5लाइनहरु, जो मा सांगीतिक एकाइहरु स्थित छन् Stave। तल देखि तिनीहरूलाई विचार गर्नुहोस्। टिप्पणीहरू ध्वनि क्रममा गोलो गोबर को रूप मा दायाँ बायाँ लेखिएका छन्। प्रत्येक सांगीतिक एकाइ एक विशेष मिल वा लाइन तिनीहरूलाई बीच मा स्थित छ। कहिलेकाहीं अतिरिक्त लाइन लागू हुन्छ। तिनीहरूले तल stave वा अप विस्तार गर्नुहोस्। थप रेखाहरू एक निश्चित लम्बाइ छ। तस्बिरमा टिप्पणीहरू, यी लाइनहरु मा राखिएको हुनुपर्छ जसको लागि आवश्यक ठीक। को सांगीतिक एकाइ को ठाडो स्थिति ध्वनि उचाइ लागि निर्भर गर्दछ।
छवि टिप्पणीहरू तीन तत्व समावेश गर्नुहोस्। तेर्सो दिशामा विस्तार गर्ने गोलो टाउको भनिन्छ। को ठाडो लाइन Acceding को शान्त को नाम हो। पछिल्लो एक वा बढी बाङ्गो रेखाहरू देखि विदा। तिनीहरूले झण्डा वा पुच्छर भनिन्छ। टाउको भरिएको वा खाली छ। पुच्छर र शान्त कुनै परिस्थितिमा, अनुपस्थित। को वर्णन सुविधाहरूमा धन्यवाद नातेदार अवधि ध्वनि डिजाइन परिभाषित छन्। स्थान टाउको लाइनहरु सापेक्षित उचाइ निर्धारण गर्छ। पारस्परिक व्यवस्था आफ्नो कार्यान्वयन को क्रम संकेत गर्छ।
जब रेकर्ड टिप्पणीहरू एक विशेष तरिकामा राखिनेछ। आफ्नो टाउको लाइनहरु वा तिनीहरूलाई बीच छन्। प्रत्येक स्थिति एक निश्चित स्तर गर्न पत्राचार - सात मध्ये एक। यसलाई विभिन्न अक्टाभेस मा दोहोर्याइएको छ। सम्बन्धित तथा चरणमा कर्मचारीहरु गर्न प्रमुख दिइएको छ। आधारभूत चरण स्थिति यसरी घट्यो वा बढ्यो हुन सक्छ। यो उद्देश्य लागि, मुख्य वा आवधिक accidentals। तसर्थ, पिच शिविर मा सांगीतिक एकाइहरु को स्थिति मा आधारित निर्धारण गरिन्छ। यो खातामा साँचाहरू र accidentals लाग्छ।
हामी पहिले नै संगीत को पूरा नाम गठन भएको थियो कसरी देख्यो, तर त्यहाँ सांगीतिक एकाइहरु बैठक जब तपाईं ध्यान गर्नुपर्छ भनेर केही रोचक अंक हो। को मिल र तिनीहरूलाई बीच स्पेस प्रत्येक लाइन ORDINAL मूल्य तोकिएको छ। टिप्पणीहरू यस अनुक्रम परिवर्तन गर्दैन। तसर्थ, मिल मा सबै संगीत टुक्रा को स्थिति निर्धारण गर्न, एक स्थिति थाहा पर्याप्त छ। यस मामला मा, स्वतः बाँकी हिसाब गरिन्छ।
संगीत को प्रस्थान छ नोट निर्दिष्ट गर्न साँचाहरू छन्। यी विशेष वर्ण समावेश गर्नुहोस्। तिनीहरूले staves को बाँकी अन्त मा लेखिएका छन्। सबै भन्दा साधारण ट्रेबल कुंजी। यो2लाइन पहिलो अक्टेभ Language सम्बन्धी एक तल टिप्पणी नुन छ भन्ने संकेत गर्छ। बास कुंजी गर्न Litera «फा» ग्राफिक्स लगाया। उहाँले टिप्पणी कम अक्टेभ Language मा "एफए" माथिबाट दोस्रो लाइन गर्न पत्राचार बाहिर अंक। अन्य कुञ्जीहरू - basoprofundovy र पुरानो फ्रान्सेली - कम साधारण हो।
त्यहाँ विशेष संगीत साधन हो। तिनीहरूलाई लागि पार्टी "माथि" साँचाहरू मा लेखिएका छन्। त्यहाँ चिरपरिचित "शुद्ध" संगीत हो। समतल र तेज - साथै, हामी आफ्नो डेरिवेटिव बारेमा बिर्सनु हुँदैन। लिखित टिप्पणीहरू विशेष वर्ण बाँकी तिनीहरूलाई संकेत गर्न। तिनीहरूले हेरफेर को संकेत भनिन्छ। यी प्रतीक प्रत्येक लाइन को सुरुमा स्थित हुन सक्छ। यो tonalities सबै टिप्पणीहरू कार्यान्वयन वा dieznom संस्करण भन्ने हो। प्रमुख लक्षण, भनिन्छ जो लाइन को सुरुमा छन्। तत्व अलग टिप्पणीहरू मा, अनियमित नाम थिए छन्। सबै अक्टाभेस मा एक घडी चक्र अन्तिम कार्य। त्यहाँ हेरफेर अर्को विशेष चिन्ह छ। उहाँले Bekar भनिन्छ। यो पहिले समतल वा तेज उल्लेख रद्द गर्न प्रयोग गरिएको छ।
रंग गोलो स्कोर अवधिको संकेत गर्छ। साथै, यो अन्य तत्व को एक नम्बर प्रयोग गर्दछ वर्णन गर्न। मुख्य लम्बाईहरू सारा छन् र आधा, चौथाई, आठौं, सोह्रौं र तीस दुई। धेरै कम एउटा सानो वा ठूलो भाग प्रयोग गर्न संभावना। एक पुरा टिप्पणी को अवधि - एक नातेदार मूल्य छ। यसलाई एक निश्चित बिन्दु मा टेम्पो को उत्पादन मा निर्भर गर्दछ। एक छडी - एक पंक्ति भन्दा कम एक चौथाई को एक अवधि संग केहि टिप्पणीहरू छन् भने, तिनीहरू एक किनारा प्रतिनिधित्व छन्।
एडवर्ड Starks: फोटो, जीवनी
एक तल Shavo Odadjian को Bassist प्रणाली
वृहदअर्थशास्त्र र सूक्ष्म अर्थशास्त्र के हो?
बरफ पहाड र यूराल को मोती - Kungur गुफा
ओवन मा बच्चाहरु पिंडली पाक्नु: चेक मा खाना पकाउने
जो "रबिन्सन Crusoe" लेखे? दानियल Defoe उपन्यास: सामग्री, मुख्य वर्ण